जानेहरू त गैहाले, बाँच्नेले फेरि संसार सजाउ | साहित्य संगालो २०१३
जानेहरू त गैहाले, बाँच्नेले फेरि संसार सजाउ
Posted on June 11, 2015 by भण्डारी2013
(पद, पैसा र प्रतिष्ठालाई महत्व नदिने जनगायक जीवन शर्मा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले भत्काएका गाउँमा गीत गाउँदै हिँडिरहनु भएको छ । गाउँमा घरवारविहीन भएकाहरू पनि आफ्ना गीत सुनेर आशावादी भएको उहाँको अनुभव छ । विपतका बेला साहित्य कसरी राहतको माध्यम बन्न सक्छ ? यस सम्बन्धमा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष तथा जनगायक जीवन शर्मासँग पहिलो पोस्ट डट कमका रविराज बरालले गर्नु भएको कुराकानी समय सान्दर्भिक र निकै उपयोगी रहेकाले हामीले यहाँ पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ः का. सम्पादक)
० भूकम्प पुनर्निर्माण्ँका लागि मौका हो भन्छन् केही मान्छे । मौका हो वा होइन ? त्यहाँ कला–साहित्यको के भूमिका हुन्छ ?
विपत्ति मौका होइन । तर यो विपत्तिपछि पीडाले छट्पटिएका हृदयबाट नयाँ सिर्जना निस्कन्छ । त्यही सिर्जनाले विस्तारै दुःख बिर्साउँदै लैजान्छ । यो बेला बेग्लै खालका साहित्य र सङ्गीत जन्मन्छन् । पञ्चायत कालमा फरक खालका गीत बने । सङ्कटकालमा एक प्रकारको पीडा थियो, अर्कै खालका गीत बने । भूकम्पपछि पनि त्यस्तै खालका रचना निस्केका छन् । विपत्तिको पीडा र दुःखपछि त्यही छटपटाहटका बीचबाट कलाको सिर्जना हुन्छ । यसलाई मौकाभन्दा पनि विपत्तिमा नयाँ सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ ।
भूकम्पले मान्छेहरूको घमण्ड हल्लायो भन्छन् । त्यस्तो पाउनु भयो ? कि त्यो क्षणिक मात्र हो ?
त्यो त मान्छेको प्रवृत्ति हो । एउटा घटनाले संस्कार खतम हुँदैन । भूकम्पपछि पनि त नराम्रा कुरा भैरहेकै छन् नि । भूकम्पले चरित्र बदल्न सक्दैन । त्यसका लागि त सांस्कृतिक क्रान्तिकै आवश्यकता पर्छ । संस्कारमै परिवर्तन नआएसम्म त्यो सम्भव हुँदैन । सत्य, न्याय र समानतामा आधारित समाजमा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । एक छिन झस्कायो, त्यति हो ।
कला साहित्यले समाजको सेवा कसरी गर्न सक्छ ? शोकलाई शक्तिमा कसरी बदल्न यसले कसरी सहयोग गर्छ ?
यस पटक म साहित्यकारकै टिमसँग सँगसँगै हिँड्ने अवसर मिल्यो । कविता सुनेर मानिसहरू दङ्ग भए । कविता सुनेर मानिसहरू आवादी भए । एकै छिन सुनेको साहित्यले अब बाँचिन्छ भन्ने भरोसा लिएर मानिसहरू फर्के । त्यसो भएर साहित्य मानसिक राहतको सशक्त माध्यम हुँदो रहेछ । मान्छेलाई आपत, विपत र पीडामा परेका बेलामा के गरम् ? कसो गरम् ? कहाँ गएर दिल बहलाउँ भन्ने खालको अवस्था हुन्छ । घर भत्केको छ । टिभी छैन । दिनदिनै भूकम्पले झस्काइरहेको छ । त्यस्तो बेला गीत–सङ्गीत, कला र साहित्यको माध्यमबाट मानिसलाई भविष्यप्रति आशावादी बन्ने, जीवनप्रति आशावादी बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदो रहेछ ।
कविता र गीत भनेको त आनन्द भएको बेला पो सुन्ने त । यस्तो दुखमा मान्छे कसरी रमाउन सक्छ र साहित्यमा हामीले सबैभन्दा पीडित जहाँ थिए, त्यहाँ गएर गीत गायौँ, कविता सुनायौँ । सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर र मेलम्चीमा सबैभन्दा घर भत्किएका छन् । त्यहाँ सबै मानिस घर भत्किएपछि पालमा बसेका छन् । हामीले गीत गाउँदा, कविता सुनाउँदा त्यहाँका मानिसले राहत महशुस गरे । यस्तो पीडाका बेलामा पनि गीतभन्दा कोही वौद्धिक तर्क गर्ने भेटिए । यस्तो तर्कले व्यावहारिक जीवनमा अर्थ राख्दैन । उनीहरूलाई अहिले सान्त्वना चाहिएको छ । मानसिक राहत चाहिएको छ । खाएर मात्र भएन अब । चामलको थैलो लगेको छ । चाउचाउ लगेको छ । पाल पाएको छ । तर त्यसले डर हटाउँदैन । गीत÷सङ्गीत र साहित्यले भत्केको दिमागमा मह्लमपट्टी लगाउँछ । मध्य रातमा मान्छे आयो आयो भन्दै दगुर्छ । यस्तो अवस्थामा मानसिक आनन्द दिने भनेको साहित्य, कला र सङ्गीत नै हो ।
तपाईले भन्नु भयो– साहित्यले पीडामा मह्लम लगाउँछ । पीडामा मह्लम लगाउँदा मान्छेहरूले राहत महशुस गर्छन् । अब साहित्य र कलाको उपचार गर्ने र उठाउने काम हुन्छ । पुनर्निर्माण्ँको कुरा आइरहेको छ । साहित्यले यहाँनेर उठाउने काम कतिखेर गर्छ ?
मानिसहरूलाई पुनर्निर्माणका लागि पनि जागृत त गर्नु पर्‍यो नि । भूकम्पले मानिसहरू मुर्छित अवस्थामा छन् । होसमा ल्याउनु पर्‍यो । जगाउनु पर्‍यो । आत्मविश्वास पैदा गर्नु पर्‍यो । त्यो आत्मविश्वासले “भूकम्प सधैँ आउँदैन, आएमा सामना गर्नु पर्छ” भन्ने भावनाको विकास गर्छ । सबैले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । सधैँभरि राहत वितरण गरेर वा थापेर बसेर त हुँदैन । नियमिततालाई पुनः फर्काउनका लागि पनि साहित्य सङ्गीतले हाम्रो दिमाग वासआउट गर्ने काम गर्छ । भूकम्पको ह्याङ ओभर पखालेर नयाँ आशाका पालुवा भर्नु पर्छ ।
आशाको नयाँ पालुवा छर्ने उद्देश्य बोकेको तपाईको पछिल्लो सिर्जना सुनौँ न ।
मैले एउटा गीत सिर्जना गरेको छु ः
आउ सबले हात मिलाउँ
भूकम्पका यी पीडा बिसाउँ
जानेहरू त गैहाले
बाँच्नेले फेरि संसार सजाउँ
कहीँ फुट्छ ज्वालामुखी
कहीँ चल्छ हावा हुरी
कहीँ जान्छ महाभूकम्प
हजार हजार मान्छे मारी
मनका सारा पीडा बिसाउँ
विपत्ति यस्ता झेल्दै झेल्दै
मानव जाति आयो यहाँ
प्रकृतिको यो हुँकारसँग
एक्लै लडेर हुन्छ कहाँ ?
आऊ सबले हात मिलाउँ
यस खालको गीत गाएपछि मान्छेले राहतको अनुभव गरे । मर्ने मरे, अब बाँच्नेले केही गर्नु पर्छ भन्ने भाव पैदा भयो ।
यसको अन्तिममा पाठकलाई के भन्नु हुन्छ ?
भूकम्प जानु, ज्वालामुखी विस्फोट हुनु, चट्याङ पर्नु, आँधीतुफान हुरी चल्नु, यी सबै प्रकृतिका खेल हुन् । प्रकृतिको खेल चलिरहन्छ । हामी हरेक अवस्थामा आशावादी भएर अघि बढ्नु पर्छ । दायित्ववोध गरौँ र सामान्य जीवनतिर फर्कौँ ।
This entry was posted in नेपाली शिर्षकहरु and tagged जानेहरू त गैहाले, बाँच्नेले फेरि संसार सजाउ by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.